Imaaraadka & Somaliland Oo Si Rasmi Ah U Saxiixay Heshiiskii Berbera
Masuuliyiin ka kala socda Somaliland iyo dawladda Imaaraadka Carabta ayaa magaalada Abu Dubai ee xarunta dalka Imaaraadka ku kala saxiixday heshiis maamulka Somaliland ay ku ogolaanayaan in Dowladda Imaaraadka ay saldhig militari ka sameystaan magaalada Berbera ee gobolka Waqooyi Galbeed.
Madaxdii joogtay madasha heshiiska ee mataleysay Somaliland waxaa kamid ah Wasiirka Arimaha Dibadda ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, Madaxweyne ku xigeenka Somaliland iyo masuuliyiin kale.
Wasiirka Arimaha Dibedda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire oo saxaafadda la wadaagay qodobada labada dhinac ay ku heshiiyeen ayaa yiri:
“”Maanta oo Axada, oo taariikhdu tahay 19ka bisha Maarj 2017ka, waxaa heshiis ku kala saxiixday magaalada Abu Dabey Dowladda Isutagga Imaaraadka iyo Dowladda Jamhuuriyadda Somaliland. Heshiiskaas oo koobaya iskaashi dhinacyada amniga, dhaqaalaha, siyaasadda iyo arimaha dibadda. kaas oo ku saleysan goaankii baarlaamaanka Jamhuuriyadda Somaliland kasoo baxay 12kii bisha Febraury 2017kii.
Heshiisku waxuu ka koobanyahay qodobadan:
Dowladda Somaliland oo ogolaansho siisay in ciidamada dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta isticmaalaan madaarka diyaaradaha ee Berbera
Dowladda isutagga imaaraadka oo ka dhisi doonto madaar cusub oo ku yaalla magaalada berber oo ay isticmaali doonaan diyaaradaha rakaabka iyo kuwa xamuulka, taasoo micnaheedu yahay iney Berbera ay yeelan doonto laba madaar. Jidka isku xera magaalooyinka berbera iyo togwajaalle oo dhererkiisu yahay 250Km ayaa isna kamid ah mashaariicda la fulin doono. Mashaariic kale oo la fulin doono waxa ay la xiriiraan biyaha, tamarta, caafimaadka iyo waxbarashada. Mashaariicdaas waxaa la fulin doonaa sadexda sanadood ee soo socda.
Dowladda isutagga imaaraadka carabta oo suuqyadeeda shaqo u furi doonta muwaadiniinta reer somaliand
Dowladda isutagga imaaraadka carabta oo taageeri doonta shirkadaha maalgashiga ee Imaaraadka in ay maalgeshadaan Somalinad
Dowladda isutagga imaaraadka carabta iyo Somaliland oo iska kaashan doona dhinaca amaanka.
Waxa uu heshiiskan albaabo cusub u furi doonaa Somaliland iyo beesha caalamka.
Ugu dambeyn, waxaa kale oo labada dhinac isla garteen in dowladda isutagga imaaraadka carabtu gargaar dagdag ah garsiiso dadka ku tabaaloobay abaaraha”” – Dr. Sacad Cali Shire
Heshiiskan oo ay dowladda Imaaraadka iyo Somaliland kala saxiixdeen ayaa waxaa dhinaca dowladda Imaaraadka Carabta u saxiixay Maxamed AL-Zuweydi, halka dhinaca Somaliland uu u saxiixay Dr. Sacad Cali Shire oo ah Wasiirka Arimaha Dibedda Somaliland.